UTİKAD Ayaa U Wareejin doonta Qeybtaan Sektör Forward Bu Sanadkaan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulUTIKAD ayaa wax ka beddeli doonta qaybtan "Next"
30 / 01 / 2019 34 Istanbul, hawlaha, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY
UTİKAD, Ururada Shaqaalaha Caalamiga ah ee Adeega Gaadiidka iyo Adeega Soogalootiga ayaa duubay gacmahooda si ay u qaabeeyaan mustaqbalka qaybta. UTİKAD Shirweynaha 2018 Summit Shirkad ka dhiga mustaqbalka qaybta sahayda ee 2018-Logistik ee mustaqbalka, UTİKAD waxay isku keenaysaa fikradda 2019 iyadoo la eegayo fikradda isbedelka adduunka.
"UTİKAD Shirwaynaha 2019-Horukaca Hore", 25 waxa lagu qaban doonaa Sebtembar 2019 ee Hampton by Hilton Istanbul Zeytinburnu. Dib-u-eegista hore ee isbedelka qaybta sahayda iyo dhammaan qaybaha la xidhiidha qaybta sahayda ayaa la qaban doonaa dhammaan dhinacyada kulankan.
UTIKAD's 19 waa sii socoshada Shirarka Soodhaweynta Munaasibka ah ee lagu qabtay September 2018. Kulanka Dib-u-Bedelka Sare ayaa la dhiirigeliyaa fikradda Is-beddelka Horumarinta (Miisiinka), kaas oo ujeedkiisu yahay inuu keeno waxqabadyo iyo muuqaal cusub oo badeecadaha ah iyada oo isbedel ku sameynaya qaybta hadda jirta.
Inkastoo Isbedelka Horumarinta waxaa lagu dabaqayaa maaddooyinka, horumarinta farsamada sida sirta farsamada, hawlaha robotics, shabakadaha internetka, awoodda dhabta ah ee qaybaha oo dhan si loo baddalo moodooyinka ganacsi ee hadda jira si loo abuuro qiime dheeraad ah.
Si kale haddii loo dhigo, si ay u waafajiyaan tiknoolajiyada iyagoo isgaadhsiinaya mustaqbalka xawaare aad u sarreeya, isbeddel sare oo ka yimaada shirkadaha saadka ah si ay u siiyaan maamulayaasha caanaha, saarayaasha iyo macaamiisha ayaa loo baahan yahay. Kulanka UTİKAD ee 2019, waxaan ka hadli doonaa sidii loo sii wadi lahaa iyo sida ay u saameeyn doonto mawjadan isbedelka.
Marka laga reebo tayada aagga foyerka ah, Bandhigga Dib-u-Soo Bixinta Caruurta ee Horumarinta, oo ay ka mid yihiin shaqooyinka ay soo saareen ardayda xanaanada iyo heerka hoose, iyo Aagga Robotic Generation Innovation, oo ah robots oo ay soo saaraan ardayda dugsiga sare iyo jaamacadda ayaa la dhigi doonaa.UTIKAD)
Gaadiidka cusub wuxuu u gudbin doonaa dekedda Piraeus oo ah xarunta Yurub
Tareenka si uu u noqdo Tekirdağ oo ah magaalada gaadiidka iyo ganacsiga
Shirka Soodhaweynta mustaqbalka